သငျးသငျးရဲ့နာမညျကွီးနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ ထှကျပျေါလာ – Alanzayar
သငျးသငျးရဲ့နာမညျကွီးနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ ထှကျပျေါလာ
အလှမယျသငျးသငျးလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ ပရိသတျ တှလေညျး သိပွီးသား ဖွဈကွမှာပါနျော သူမကတော့ မငျးသားဝဠေုကြျောနဲ့ ကတောကျကဆ ဖွဈပွီးနောကျပိုငျးမှာ‌တော့ ဝဖေနျမှုတဈခြို့ကို ခံခဲ့ရသူလညျး ဖွဈပါတယျ
မကွာခငျကာလတုနျးကလညျး သငျးသငျးဦးဆောငျတဲ့ ပရိဟိတအဖှဲ့ တဈခုနဲ့လညျး အဆငျမပွမှေုတှေ ဖွဈလာခဲ့ပွီးသူမကိုယျတိုငျ စိတျညဈမှုတှနေဲ့အတူ Live လှငျ့ပွီး ဖွရှေငျး လာခဲ့ပါသေးတယျ။ခုလိုဖွဈနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့အခွအေနအေရမှာ့ လူတိုငျးဟာ စီးပှားရေးတှေ ကပျြတညျး ကုနျကွတာ ဖွဈပါတယျနျော
ကိုဗဈ ကွောငျ့လညျးအောကျဆီဂငျြလိုအပျတဲ့နရောတှေ မှာလညျး သငျးသငျးကအောကျဆီဂငျြတှေ ရှာပေးတဲ့ လုပျအားဒါနတှကေိုလညျး ပွုလုပျ ခဲ့ပါသေးတယျ။
နောကျပိုငျးမှာတော့ သငျးသငျးက သူမရဲ့လှုပျရှားမှုလေးတှကေို ဖဘေု့တျ စာမကျြနှာမှာ မတငျတော့ဘဲ Tiktok မှာပဲ တငျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။ဒီနမှေ့ာလညျး သငျးသငျးက သူမရဲ့ကိုယျပိုငျကားနဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ Tiktok လေးကို သူမရဲ့ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျတငျပေးလာတာ …. crd
သင်းသင်းရဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာ
အလှမယ်သင်းသင်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ် တွေလည်း သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါနော် သူမကတော့ မင်းသားဝေဠုကျော်နဲ့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ‌တော့ ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ကို ခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်
မကြာခင်ကာလတုန်းကလည်း သင်းသင်းဦးဆောင်တဲ့ ပရိဟိတအဖွဲ့ တစ်ခုနဲ့လည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူမကိုယ်တိုင် စိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့အတူ Live လွှင့်ပြီး ဖြေရှင်း လာခဲ့ပါသေးတယ်။ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့အခြေအနေအရမှာ့ လူတိုင်းဟာ စီးပွားရေးတွေ ကျပ်တည်း ကုန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်
ကိုဗစ် ကြောင့်လည်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ မှာလည်း သင်းသင်းကအောက်ဆီဂျင်တွေ ရှာပေးတဲ့ လုပ်အားဒါနတွေကိုလည်း ပြုလုပ် ခဲ့ပါသေးတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သင်းသင်းက သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ မတင်တော့ဘဲ Tiktok မှာပဲ တင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်း သင်းသင်းက သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Tiktok လေးကို သူမရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက်တင်ပေးလာတာ …. crd
Previous Article ဝကျသားတုတျထိုးကို ပိုကျဆံပေးပွီး ကိုယျတိုငျ ဝယျစားတတျတဲ့ လူဝငျစား ခှေးလေး…
Next Article မငျသမီး မယျလိုဒီဟာ စဈဗိုလျတဈဦးနှငျ့ ဘယျလိုအခွအေနထေိရောကျနပွေီလဲဆိုတာကို ပွောပွနသေော ပုံရိပျဓာတျပုံမြား